Undermount Drawer Slides mpanamboatra & mpamatsy - China Undermount Drawer Slides Factory
Fanitarana feno miharo volo miafina mihidy mihidy mpihazakazaka miafina miafina miaraka amina fononteny voalohany 3D mazàna ampiasaina ho an'ny lakozia sy lakozia. Ity karazana slide drawer undermount ity dia mampiasa visy azo ovaina ary plugina plastika amina ireo vatasarihana hazo. Manana milina TAIWAI avo lenta, miaraka amina hevitra ambony famolavolana ny ekipa teknika tena tsara anananay ary manamboatra fatratra ny fitaovana GERISS tsara tarehy sy préfest izay safidy tsara indrindra amin'ireo orinasa manerantany.
Torohevitra fanitarana malefaka manakaiky eo ambanin'ilay sary mivalona misy visy sy tsipika azo ovaina
Fampidirana:Tselatra fanitarana malefaka akaiky eo ambanin'ny vatasarihana sary mihetsika miaraka amin'ny visy sy tsipika azo ovaina ampiasaina amin'ny valizy ao an-dakozia sy any amin'ny fandroana. Ity karazana slide drawer undermount ity dia mampiasa visy azo ovaina ary plugina plastika amina ireo vatasarihana hazo. Manana milina TAIWAI avo lenta, miaraka amina hevitra ambony famolavolana ny ekipa teknika tena tsara anananay ary manamboatra fatratra ny fitaovana GERISS tsara tarehy sy préfest izay safidy tsara indrindra amin'ireo orinasa manerantany.
Fampidirana:Toro-hevitra Extension Soft Close Undermount Drawer Slide miaraka amin'ny Front Connector izay matetika ampiasaina amin'ny lakozia ao an-dakozia sy fandroana. Ity karazana slide drawer undermount ity dia mampiasa visy azo ovaina ary plugina plastika amina ireo vatasarihana hazo. Manana milina TAIWAI avo lenta, miaraka amina hevitra ambony famolavolana ny ekipa teknika tena tsara anananay ary manamboatra fatratra ny fitaovana GERISS tsara tarehy sy préfest izay safidy tsara indrindra amin'ireo orinasa manerantany.
Toro-hevitra misintona manosika Undermount Drawer miaraka amin'ny visy azo ovaina
Fampidirana: Tselatra fanitarana tokana mitaingina Undermount Drawer Slide miaraka amin'ny visy azo ovaina matetika ampiasaina amin'ny vata fidiovana sy lakozia Ity karazana slide drawer undermount ity dia mampiasa visy azo ovaina ary plugina plastika amina ireo vatasarihana hazo. Manana milina TAIWAI avo lenta, miaraka amina hevitra ambony famolavolana ny ekipa teknika tena tsara anananay ary manamboatra fatratra ny fitaovana GERISS tsara tarehy sy préfest izay safidy tsara indrindra amin'ireo orinasa manerantany.
Slide Drawm feno-fanaka feno fanosotra feno ho an'ny kabinetra tsy misy sary - tabilao misy sary 16mm
Fampidirana:Sarin-tsarimihetsika feno rindrambaiko ambany-ety feno fanitarana ho an'ny paosy tsy misy rafitra - tabilao 16mm matetika ampiasaina amin'ny vata-dakozia sy fidiovana. Ity karazana slide drawer undermount ity dia mampiasa visy azo ovaina ary plugina plastika amina ireo vatasarihana hazo. Manana milina TAIWAI avo lenta, miaraka amina hevitra ambony famolavolana ny ekipa teknika tena tsara anananay ary manamboatra fatratra ny fitaovana GERISS tsara tarehy sy préfest izay safidy tsara indrindra amin'ireo orinasa manerantany.
Mpihazakazaka feno vatam-paty miafina miafina miafina miafina feno - takelaka sisin-taratasy 18mm
Fampidirana:Mpihazakazaka feno vatam-paty miafina miafina miafina miafina feno - takelaka amin'ny sisin-taratasy 18mm matetika ampiasaina amin'ny vata-dakozia sy fidiovana. Ity karazana slide drawer undermount ity dia mampiasa visy azo ovaina ary plugina plastika amina ireo vatasarihana hazo. Manana milina TAIWAI avo lenta, miaraka amina hevitra ambony famolavolana ny ekipa teknika tena tsara anananay ary manamboatra fatratra ny fitaovana GERISS tsara tarehy sy préfest izay safidy tsara indrindra amin'ireo orinasa manerantany.
Fampidirana:Sarina malefaka akaiky eo ambanin'ny vatasarihana takelaka miafina solosaina feno fanitarana miaraka amina sary eo aloha izay matetika ampiasaina amin'ny lakozia ao an-dakozia sy fidiovana. Ity karazana slide drawer undermount ity dia mampiasa visy azo ovaina ary plugina plastika amina ireo vatasarihana hazo. Manana milina TAIWAI avo lenta, miaraka amina hevitra ambony famolavolana ny ekipa teknika tena tsara anananay ary manamboatra fatratra ny fitaovana GERISS tsara tarehy sy préfest izay safidy tsara indrindra amin'ireo orinasa manerantany.
Ny fanitarana eo amin'ny farany ambany dia apetaho amin'ny sary fanalana lamba malaky miaraka amin'ny fitaovana fanidiana
Fampidirana:Ny fanitarana ambany dia mametraka sary maloto kely amin'ny vatasarihana fanidiana miaraka amin'ny fitaovana fanidiana matetika ampiasaina amin'ny vata-dakozia sy fidiovana. Ity karazana slide drawer undermount ity dia mampiasa clip fitaovana fanidiana amin'ny vatasarihana hazo. Manana milina TAIWAI avo lenta, miaraka amina hevitra ambony famolavolana ny ekipa teknika tena tsara anananay ary manamboatra fatratra ny fitaovana GERISS tsara tarehy sy préfest izay safidy tsara indrindra amin'ireo orinasa manerantany.
Manosika fanitarana feno hisokatra eo ambanin'ny sary mitsivalana an-tendrombohitra misy tsimatra azo ovaina
Fampidirana:Manosika fanitarana feno hisokatra eo ambanin'ny sary mitsivalana amin'ny vatasarihana misy paingotra azo ovaina ampiasaina matetika amin'ny vata-dakozia sy fidiovana. Ity karazana slide drawer undermount ity dia mampiasa visy azo ovaina ary plugina plastika amina ireo vatasarihana hazo. Manana milina TAIWAI avo lenta, miaraka amina hevitra ambony famolavolana ny ekipa teknika tena tsara anananay ary manamboatra fatratra ny fitaovana GERISS tsara tarehy sy préfest izay safidy tsara indrindra amin'ireo orinasa manerantany.
Fanaparitahana amin'ny lafiny feno nitaingina malefaka famaranana Wire-harona slide
Fampidirana:Full Extension Side Mounted Soft Closing Wire-basket Slide matetika ampiasaina amin'ny lakozia lakozia sy fidiovana. Ity karazana tadin'ny harona tariby ity dia mampiasa visy hanamboarana ilay vatasarihana harona. Manana milina TAIWAI avo lenta, miaraka amina famolavolana endrika ambony ny ekipa teknika tena tsara anananay ary manamboatra tsara ny fitaovana GERISS tsara tarehy sy préfest izay safidy tsara indrindra amin'ny orinasa fanaka manerantany.
Mpihazakazaka feno fanitarana feno ho an'ny vatasarihana harona fisintahana
Fampidirana:Mpihazakazaka feno fanitarana feno ho an'ny vatasarihana harona mivalona ampiasaina matetika amin'ny vatasarihana harona tariby. Ity karazan-drindrina anaty drawmount ity dia mampiasa visy manamboatra ireo vatasarihana harona. Manana milina TAIWAI avo lenta, miaraka amina hevitra ambony famolavolana ny ekipa teknika tena tsara anananay ary manamboatra fatratra ny fitaovana GERISS tsara tarehy sy préfest izay safidy tsara indrindra amin'ireo orinasa manerantany.
Model No .: EUR33U
Telo fanjifana ambany fipetrahan'ny lamba fantsom-bokatra fatana an-dakozia
Fampidirana:Telo fanitarana eny ambanin'ny tendrombohitra an-dakozia harona feno vatasarihana sary moso-doko ampiasaina amin'ny mpantsaka harona feno harona. Ity karazan-tsoratry ny vatasarihana ambany ity dia mampiasa visy hanamboarana ilay vatasarihana harona ao anaty harona. Manana milina TAIWAI avo lenta, miaraka amina hevitra ambony famolavolana ny ekipa teknika tena tsara anananay ary manamboatra fatratra ny fitaovana GERISS tsara tarehy sy préfest izay safidy tsara indrindra amin'ireo orinasa manerantany.
Model No .: EUR33U2